Qalliinka batteriga, jarista beerta, qulqulka saameynta - FEIHU
Maqas aan xad lahayn
nagu saabsannagu saabsan
Zhejiang Feihu Teknolojiyadda Tamarta Cusub Co., Ltd.waa soo saare xirfadle ah oo dhoofiya kaas oo ka kooban naqshadeynta, R&D, wax soo saarka iyo iibinta qalabka lithium-ka cusub. Teknolojiyada Feihu waxay leedahay dhir casri ah, wax soo saar heerka koowaad ah iyo qalab tijaabo ah, kaasoo daboolaya aag dhan 30,000 oo mitir murabac ah, aagga dhismaha oo gaaraya 20,000 mitir murabac ah. Waqtigaan la joogo, waxaa jira in kabadan 400 oo shaqaale, oo ay kujiraan tayo sare oo xirfadlayaal sare, abaabul awood leh iyo kooxda suuq geynta
Alaabada sifaysanAlaabada sifaysan
21V daloolin awood batteri Lithium
16.8V Lithium daloolin awood koronto
12V daloolin awood batari Lithium
wararkii ugu dambeeyaywararkii ugu dambeeyay
Maxaad Ka Taqaanaa Qoditaanka Korontada
Laydhka korontadu waa mashiin qodista oo u isticmaala korantada awood ahaan. Waa badeecad caadi ah oo ka mid ah qalabka korontada iyo tan ugu baahida badan qalabka wax soo saarka korantada. Tilmaamaha ugu muhiimsan ee layliyo koronto waa 4, 6, 8, 10, 13, 16, 19, 23, 32, 38, 49mm, iwm. Lambaradu waxay tilmaamayaan dhexroorka ugu badan ee ...
Sida Loo Xulo Qoriga Biyaha Lagu Cadaadiyo
Kordhinta lahaanshaha baabuurta, qiimaha maydhashada baabuurta ayaa sidoo kale kor u kacay. Qaar badan oo ka mid ah milkiileyaasha gawaarida yar yar ayaa u weeciyay aragtidooda inay doortaan raqiis, dhaqsi, ku habboon, iyo jawi u wanaagsan dhaqashada baabuurta guryaha. Markaad baabuur ku dhaqayso guriga, sidoo kale waa lagama maarmaan inaad haysato baabuur biyo dhaqid gu ...
Farqiga U Dhaxeeya Lithium Drill 12V Iyo 16.8V
Tababbarka korontada waxaa badanaa loo isticmaalaa nolol maalmeedkeena. Marka aan u baahanahay inaan qodno godad ama ku dhejino boolal guriga, waxaan u baahanahay inaan isticmaalno layliyo koronto. Waxa kale oo jira farqi u dhexeeya tababbarka korantada. Kuwa caadiga ah waa 12 volts iyo 16.8 volts. Markaa maxay ku kala duwan yihiin labadooda? Maxay ku kala duwan yihiin ...
Bishii Ogosto 2020, shirkadeena waxay soo saartay moodooyin cusub oo lithium ah ……
Bishii Ogosto 2020, shirkadeennu waxay soo saartay moodallo cusub oo ah qalabka tamarta batroolka lithium, qoryaha biyaha batroolka lithium iyo beertada beertada lithium, waxayna mariyeen shahaadada GS, iyadoo waddada u xaaraysa gelitaanka dambe ee suuqyada Yurub iyo Ameerika. Alaabtu waxay daboolayaan 12V hadda caan ah ...